Casrigan dhaqammada badan, waxaa lama huraan ah in la ballaariyo qaybtaada xiriirka. Iyada oo leh Jean-Marc Pairraud, waxaad ku cabbiri doontaa muhiimadda ay leedahay fahamka wada-hadalkaaga iyo awoodda aad ugu gudbin karto farriin isku xiran. Dhamaadka tababarkan, waxaad haysan doontaa dhammaan hantida gacanta si aad ugu guuleysato isgaarsiinta dhaqamada badan.
Ku wada xiriir jawi dhaqamo badan Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Muxuu borotokoolka caafimaadka ka bixiyaa shirkadaha?
horeAbuur jawi shaqo wanaagsan oo caafimaad leh
socdaBaro eexda garashada